SonoStation - हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक पम्प समाधान सेटअप
अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरू व्यापक रूपमा मिक्सड, डिस्पेरि,, होमोजीनिसेसन र निकासीको लागि विभिन्न उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। जबकि सानो भोल्युम सजिलै ब्याच मोडमा sonhet गर्न सकिन्छ, ठूलो मात्रा प्रक्रियाहरूको लागि परिष्कृत इनलाइन सेटअप सिफारिश गरिन्छ। SonoStation एक पूरा आत्म-स्थायी अल्ट्रासोनिक सेटअप हो जसमा एक चिसो ट्या in्कमा कूलि jac ज्याकेट, एउटा पम्प र अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरको साथ प्रवाह कोषहरू हुन्छन्। SonoStation को परिष्कृत डिजाइन सफल अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरु को लागी पूर्ण सुविधाहरुको समाधान हो।
SonoStation, तपाईंको नवीन मिश्रण प्रणाली – सरल!
SonoStation को साथ अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंग सजिलो भयो
अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंग तपाईंको प्रक्रिया विकास वा दैनिक उत्पादनको एक चरण मात्र हो। अल्ट्रासोनिक रिएक्टरको स्थापना र अपरेसन सकेसम्म सरल हुनुपर्दछ। SonoStation एक तरल पदार्थ प्रवाह र स्थिर दबाव मा तपाइँको तरल पदार्थ अल्ट्रासोनिक रिएक्टरमा सार्न को लागी एक पयोग गर्न सजिलो पम्पिंग प्रणाली हो। हामीले एक मोबाइल प्रोसेसिंग प्रणालीमा प्रगतिशील गुहा पम्पको साथ LL एल स्टर्डेड ट्या tank्क (ज्याकेट गरिएको) एकीकृत गर्‍यौं। हामीले दुईवटा अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरूको लागि स्ट्यान्ड पनि समावेश गर्‍यौं। यस उच्च स्तरको एकीकरणले संख्या र आकार वा भिजेका भागहरू, फिटिंग र कनेक्टरहरू कम गर्दछ। यसले SonoStation लाई प्रयोग गर्न सजिलो र पारंपरिक सेटअप भन्दा सफा गर्न सजिलो बनाउँदछ। यसले खुट्टाको प्रिन्ट पनि कम गर्दछ।
अझै, यो सरलताको सीमित कार्यक्षमतामा परिणाम हुँदैन। यस कारणका लागि, हाम्रो अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू स्वचालित फ्रिक्वेन्सी ट्यूनिंग, स्वचालित डेटा प्रोटोकलिंग, स्वचालित आयाम नियन्त्रण र ड्राई-रन सुरक्षा जस्ता सुविधाहरूको साथ आउँदछ ताकि तपाईं आफ्नो प्रक्रियामा फोकस गर्न सक्नुहुनेछ।
जबकि हाम्रो अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू परिष्कृत प्रसंस्करण उपकरणहरू हुन्, जुन एकल प्रोसेसिंग उपकरणको रूपमा विश्वसनीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई अधिक जटिल प्रक्रियामा सेटअप गर्दा सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। SonoStation एक हलचल टैंक, पम्प र लगातार अल्ट्रासोनिकेसन मा समावेश एक पूरा प्रोसेसिंग सेटअप है। SonoStation एक पूर्ण, कम्प्याक्ट र शक्तिशाली सेटअप छ कि मध्यम आकार को उत्पादन मा पैमाने मा अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया को सुविधा प्रदान गर्दछ।
SonoStation को पूर्ण प्रोसेसिंग डिजाईनले तपाईलाई छिटो प्रगति गर्न मद्दत गर्दछ!
SonoStation का सुविधाहरु:
पूर्ण प्रशोधन सेटअप
4kW Sonication पावर (2x UIP500hdT बाट UIP2000hdT सम्म) समात्छ
दैनिक प्रयोगको लागि बलियो (पाइलट वा उत्पादन)
प्रक्रिया विकासको लागि लचिलो
कूलि jac ज्याकेटको साथ स्टेनलेस स्टील ट्या tank्क
क्षैतिज पम्पहरूमा जस्तो तलछट छैन
एक अल्ट्रासोनिक उत्पादन सेटअप को लागी, तपाईले अल्ट्रासोनिकेटरको बाहेक सामान पनि जस्तै ट्यांक, पम्प,… SonoStation एक पूरा अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंग सेटअप हो जुन तपाईंलाई तुरुन्त उत्पादनको लागि तयार हुन्छ!
हिलस्चर तरल प्रक्रियाहरूको लागि अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूमा विशेषज्ञता दिन्छ। अल्ट्रासोनिक इनलाइन रिएक्टरहरूले उपकरणहरू चाहिन्छ, जस्तै ट्या tank्की, पम्प, तातो-एक्सचेन्जर, भल्भ, प्रेसर सेन्सरहरू। सेटअप र अपरेसनको सुविधाको लागि, हामी Sonication प्रक्रियाहरूका लागि डिजाइन गरिएका सामानहरू प्रदान गर्दछौं। SonoStation सेटअप एक वायवीय पिंच वाल्व र एक डिजिटल डायाफ्राम स्टेनलेस स्टील दबाव दबाव सेन्सर PS7 सुविधा। हामी तरल ह्यान्डलिंग सुधार गर्न चाहन्थ्यौं।
SonoStation – ट्या complete्क, पम्प, आन्दोलक र अल्ट्रासोनिकेटरमा समावेश भएको एक पूर्ण अल्ट्रासोनिक प्रशोधन सेटअप
SonoStation अल्ट्रासोनिकेटर UIP1000hdT र फ्लो सेल रिएक्टरले सुसज्जित छ
SonoStation – एक अल्ट्रासोनिक प्रणाली, यहाँ २x 2kW अल्ट्रासोनिक्स, उत्तेजित ट्या tank्की र पम्प अनुप्रयोगहरू मिसाउने, मिलिंग गर्ने र वितरण गर्ने प्रयोगकर्ता-अनुकूल प्रणाली हो।
हामी तपाईंको लागि काम गर्छौं, ताकि तपाईं छिटो काम सक्नुहुनेछ। हामीले किन तपाइँको सिफारिशहरु मा आधारित सबै व्यक्तिगत घटकहरु को लागी हेर्न पर्छ?
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक होमोजिनाइजरहरूले प्रक्रिया विकास र उत्पादनको लागि नियन्त्रनीय र दोहोरिने योग्य सोनिकेसन उत्पादन गर्दछ।
SonoStation को प्राविधिक विवरण:
230VAC वा 115VAC
मानक पर्खाल आउटलेट को लागी एकल चरण
स्थिर प्रवाह र स्थिर दबावको लागि प्रगतिशील गुहा पम्प
VFD संग, to० देखि55 R5RPM
अधिकतम Bar बारग
उच्च चिपचिपापन, ग्रउट पनि
SonoStation को ट्या tank्क एक 38L स्टेनलेस स्टील टैंक हो। यो तापीय नियन्त्रण को लागी एक शीतलन / तताउने जाकीट को लागी फिट गरिएको छ। उदाहरण को लागी, यसलाई कूलि jac ज्याकेटको रूपमा प्रयोग गर्नाले पक्का छ कि तातो सामग्री ट्या the्क भित्तामा बेक हुँदैन र यसको भित्तामा टाँसिदैन। यसको शंक्वाकार आकारले कणहरूको अवसादनलाई बेवास्ता गर्दछ। कुंडा कास्टरमा राखिएको (व्हीलहरू) degree 360० डिग्री दिशात्मक आन्दोलनको लागि अनुमति दिन्छ र कस ठाउँहरूमा पनी गतिशीलता सुनिश्चित गर्दछ। गतिशीलताको अतिरिक्त, क्यास्टर ब्रेकहरूले ठोस पा of्ग्राहरूको पा loc्ग्रा सुरक्षित ताल्चा लगाउँदछ जसले गर्दा SonoStation इच्छित स्थानमा सुरक्षित रहन सक्दछ। इकाईलाई सुरक्षित रूपमा राख्नु अनुप्रयोगहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरूले मिक्स, होमोजाइनाईज र मिल तरल पदार्थ सामग्री। सजिलो सेटअप र ह्यान्डलिंगका लागि हामीले वर्टिकलपम्प designed० डिजाइन गरेका छौं। यो एकीकृत सेटअपले एक प्रगतिशील गुहा पम्पको साथ एक उत्तेजित L०L होल्डिंग ट्या tank्कीलाई जोड्दछ। सरलता, अपरेशनको सजिलोता र मद्दत यस पम्पि station स्टेशनको प्रमुख डिजाइन सुविधाहरू हुन्।
SonoStation – तयार गर्न-प्रक्रिया अनुप्रयोगहरूको लागि अल्ट्रासोनिक प्रशोधन सेटअप
आन्दोलनकर्ता गति समायोज्य छ र 500००RPM सम्म पुर्‍याउन सक्छ, यसैले ट्याids्कको माध्यमबाट सामग्रीलाई सार्न तरल पदार्थ र स्लरीहरूको राम्रो म्याक्रो-मिक्सि provide प्रदान गर्न सक्षम छ। विश्वसनीय आन्दोलनले सुनिश्चित गर्दछ कि सामग्री समान रूपमा अल्ट्रासोनिक फ्लो सेल रेक्टर (हरू) मा सारिएको छ र प्रशोधन गरिएको छ।
SonoStation औद्योगिक ग्रेड ultrasonicators UIP500hdT (500 वाट), UIP1000hdT (1000 वाट), UIP1500hdT (१00०० वाट), र UIP2000hdT संग उपयुक्त छ। प्रत्येक SonoStation एक वा दुई अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरको साथ पकड र अपरेट गर्न सकिन्छ। तपाईंको प्रक्रियाको आवश्यकताहरूमा समायोजन गरिएको अल्ट्रासोनिक शक्तिसँग व्यक्तिगत रूपमा SonoStation सुसज्जित गर्नाले तपाईंले इष्टतम सेटअप पाउनुहुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ!
सोनोस्टेशन पम्पले तरल वा घोललाई अल्ट्रासोनिक फ्लो-थ्रु रियाक्टरहरू मार्फत र भित्र सार्दछ। कच्चा माल र प्रक्रिया लक्ष्यको साथ अनुसार, अल्ट्रासोनिकेटरहरू आदर्श प्रोब र फ्लो सेलसँग कन्फिगर गर्न सकिन्छ। Sonotrodes / कास्काट्रोडहरू र फ्लो सेल रिएक्टरहरू को एक विस्तृत श्रृंखला सजीलै उपलब्ध छन्।
सबै औद्योगिक-ग्रेड अल्ट्रासोनिकेटरहरू सबै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारामिटरहरू जस्तै आयाम, दबाब, तापमान र Sonication समय मा सटीक नियन्त्रणको लागि अनुमति दिन्छ। यसले अल्ट्रासोनिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पुन: उत्पादन योग्य बनाउँछ। हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्सले लगातार उच्च उत्पादको गुणस्तरको महत्त्व जान्दछ र बुद्धिमान् सफ्टवेयर र स्वचालित डाटा रेकर्डि .्गद्वारा प्रक्रिया मानकीकरण र जीएमपी (राम्रो उत्पादन अभ्यासहरू) कार्यान्वयन गर्न म्यान्युफर्सलाई समर्थन गर्दछ। हाम्रो डिजिटल अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजरले स्वचालित रूपमा बिल्ट-इन SD कार्डमा सबै अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरू रेकर्ड गर्दछ। डिजिटल टच डिस्प्ले र ब्राउजर रिमोट कन्ट्रोलले निरन्तर प्रक्रियाको निगरानी गर्न अनुमति दिन्छ र प्रक्रिया प्यारामिटरहरू ठीक समायोजन गर्न सक्षम गर्दछ जब आवश्यक हुन्छ। यसले प्रक्रिया निगरानी र गुण नियन्त्रणलाई सुविधा पुर्‍याउँछ।
हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरण प्रयोगकर्ता-मैत्री, उच्च प्रदर्शन र मजबुतताको लागि डिजाइन गरिएको हो। सबै अल्ट्रासोनिकेटरहरू २ demanding/7 अपरेशनका लागि निर्माण गरिएका छन् भारी परिभ्रमणका लागि वातावरणमा माग गर्दै र कम जीवनरक्षकको साथ लामो जीवन चक्र छ।
तलको तालिकाले तपाईंलाई हाम्रो अल्ट्रासोनिकेटरहरूको अनुमानित प्रशोधन क्षमताको संकेत दिन्छ जुन SonoStation सँग उपयुक्त छ:
0.25 to 5L M० मिटर / मिनेट १L / मिनेट UIP500hdT
0.5 देखि 10L १०० मिलि / मिनेट बाट २L / मिनेट UIP1000hdT
0.75 to 15L २०० मिली / मिनेट toL / मिनेट UIP1500hdT
The UIP2000hdT २००० वाटको शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर हो, जुन SonoStation मा चढ्न सकिन्छ
औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर UIP500hdT, UIP1000hdT र UIP1500hdT कास्काट्रोडहरू र फ्लो सेल र्याक्टरहरूसँग
Sonication द्वारा कसरी उच्च-शियर मिक्स गर्ने काम गर्दछ?
अल्ट्रासोनिक होमोजिनाइजर, उच्च शियर मिक्सर र डिस्टेग्रेटरहरूले औद्योगिक मिक्सन प्रणालीहरू जस्तै उच्च स्पीड रोटर मिक्सरहरू, बहु-शाफ्ट मिक्सरहरू, कोलाइड मिलहरू, उच्च दबावको होमोजिनाइजर्स, र इम्पेलर प्रणालीहरूको रूपमा उस्तै यांत्रिक सिद्धान्त प्रयोग गर्दछन्। अल्ट्रासोनिक मिक्सिंग सिस्टमहरू तितरबितर र मिल कणहरूमा तेल र पानीको चरणहरू मिलाउन, ठोस पदार्थलाई घुलनशील बनाउन र तरल पदार्थ र घोलमा कुनै पनि प्रकारको सामग्रीको एकरूप मिश्रण उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजरहरूले अल्ट्रासोनिक प्रोबलाई समेट्छ, जसलाई Sonotrode पनि भनिन्छ, मिक्सिंग पोतमा, जस्तै ब्याच ट्या tank्कमा वा फ्लो सेलमा। अल्ट्रासोनिक प्रोबले धेरै उच्च आवृत्तिको कम्पन तरल वा घोलमा प्रसारित गर्दछ र तरलमा तीव्र ध्वनी cavitation सिर्जना गर्दछ। काभेटेशन बुलबुलेको प्रस्फोटनले शक्तिशाली कतराहरू बलमा परिणाम ल्याउँछ, जसले बूँद, टुक्राहरू, समुच्चयहरू, र प्राथमिक कणहरूलाई विघटन गर्दछ र तोड्दछ। जस्तो कि अल्ट्रासोनिक काभेटेशनले १००० किलोमिटर प्रति घण्टाको साथ उच्च वेगको कभिटेशनल स्ट्रिमि। उत्पन्न गर्दछ, cavitational तरल जेट्सले कणहरूलाई तीव्र गर्दछ। जब त्वरित कणहरू एक अर्कासँग टकराउँछन्, मिलिilling मिडियाको रूपमा कार्य गर्दछ। पछि, टक्राउने कणहरु चकनाचूर हुन्छ र माइक्रोन वा न्यानो आकारमा कम हुन्छन्। अल्ट्रासोनिक cavitation क्षेत्र मा, वैक्यूम र 1000बार सम्म वैकल्पिक चाँडै र बारम्बार दबाव। Mix मिक्सर ब्लेडको साथ एक रोटरी मिक्सर वैकल्पिक दबाव चक्र को समान आवृत्ति प्राप्त गर्न एक आश्चर्यजनक 300,000 RPM मा अपरेट गर्न आवश्यक छ। परम्परागत रोटरी मिक्सरहरू र रोटर-स्टेटर मिक्सरहरूले काभेटको कुनै महत्त्वपूर्ण मात्रा सिर्जना गर्दैन किनकि तिनीहरूको गतिमा सीमितता छ।